Madasha Wadatashiga Qaran Oo Loo Gudbin Doono Qorshaha Ugu Dambeeya Ee Doorashooyinka – Goobjoog News
Guddiga doorashooyinka ayaa la filayaa in horraanta bisha soo aadan ee August ay madasha wadatashiga qaran usoo gudbiyeen qorshaha ugu dambeeya ee doorashooyinka.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xayir Maareeye oo la hadlay wakaaladda SONNA wuxuu sheegay in 2-da bisha soo aadan magaalada Muqdisho uu ka dhici doono shirka madasha wadatashiga qaran kaasi oo arrimo badan looga hadli doono.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in madaxda dowladda ay ku adkeysanayaan in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talo-galay.
Sidoo kale wasiir Maareeye ayaa rajo ka muujiyey in shirka madasha ee bisha soo socota ka dhici doona magaalada Muqdisho kasoo baxaan natiijooyin muhiim ah.
Shirkii ugu dambeeyay ee madasha wadatashiga qaran ku yeelatay magaalada Bayadhabo ayaa waxyaabaha aadka la iskula fahmay waxaa ka mid ahaa in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda, iyadoo lasoo saaray jadwalkii doorashada.
Inkastoo jadwalkaasi lasoo saaray hadane sidii loogu talo-galay illaa hadda uma aanu dhaqan gelin jadwalkaan, iyadoo laga digayo in dib u dhac ku yimaado waqtiga doorashada loo ballansan yahay.
Maamulka Hirshabeelle Oo Yeeshay Miisaaniyaddii Ugu Horeysay
Aqalka Sare Oo Ansixiyay Sharciga Hanti Dhowrka Guud Ee Qaranka
Rweeyo ktxdwm is there a generic for cialis cialis pill
Zmnhsc rhiurh cialis without prescription cialis price costco
Vqrjzv orcwwn Generic viagra cialis on line
Ypvbaj ardfja ed meds prices of cialis
Qgempb rcknpu cialis pills cialis generic...
Httsfx jitgox cialis online buy generic cialis...
Qkkadj unimdm buy cialis cialis 20mg...
Mmuxps yacuhr cialis cost cialis coupon cvs...
free live mobile sex cams [url=https://sexcams00.site]sexcam...